Friday, 09 March 2018 23:59
Friday, 09 March 2018 23:57
Friday, 09 March 2018 23:55
Friday, 09 March 2018 23:51
Friday, 09 March 2018 23:45
Daawwannaa Ministiroota Haajaa Alaa biyyoota sadii, hariiroo waliinii cimsu
Finfinnee: Tibbana Ministirootni biyyoota sadii(Sargeeyi Laaviroov kan Ruusiyaa, Shek Abdullaah Binzayid Alnaahiya kan Imireetota Arabaa Walta’aniifi Reeksi Telersan kan Ameerikaa) shirka duraanii olitti Itoophiyaa waliin hariiroo siyaas-dinagdee cimsachuuf daawwannaa taasisaa jiru. Biyyootni sadeen kunneen tibba tokkotti haala dur hinbaramneen daawwannaaf gara Itoophiyaa dhufuunsaanii haala kamiin ibsamuu danda’a kan jedhurratti ogeessotni siyaasaa yaadolee garagaraa kennaa akka jiran, miidiyaaleerraa hubachuun danda’ameera.
Akka yaadolee ogeessota kanaatti, ministirootni biyyoota sadeenii si’a takkatti gara Itoophiyaa dhufuunsaanii gama tokkoon abdii akka qabu, gama biraan ammoo kan duriirraa homaa jijjiirama kan hinqabne ta’uusaa hubatameera. Wayita ammaa haala biyyattiin keessa jirturratti yaada bilchaataa dhiyeessuuf kan karoorfamedha jechuun yaada kan dhiyeessanis jiru. Gariin ammoo ministirootni biyyoota sadeenii si’a tokkotti daawwannaaf Finfinnee kan dhufan hariiroosaanii cimsachuufidha malee waa’ee dhimma waliigaltee siyaasa biyyattii keessa kan seenani mitii jechuun falmu; kan isaan affeeru akka hintaanes ni kaasu.
Daawwannaa ministirootaa ilaachisuun Dubbii himaan Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Obbo Mallas Alam Kibxata darbe Gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti, angawootni biyyoota kanneenii Finfinnee seenuunsaanii haala wayitawaa biyyattiin keessa jirtu waliin kan walqabatu miti. Kunimmoo waa’ee hawaas-dinagdeefi siyaasa Itoophiyaarratti murteessuu kan danda’u lammiilee Itoophiyaa qofaadha malee angawoota olaanaa biyyoota alaa akka hintaane kan mul’isuudha jedhu.
Ministiroon Hajaa Alaa Ameerikaa (USA), Ruusiyaafi Imireetoota Arabaa Walta’anii daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa dhufuunsaanii hiika guddaa qabaachuusaa garuu ifatti kaasaniiru. Kunis, rakkooleen nageenyaa amma mul’achaa jiran kan hiikamuu qabaniin waan ta’eef, hariiroon biyya keenya waliin qaban xiyyeeffannoo guddaa qabaachuusaanii kan ibsuudha jedhaniiru. Kanaaf, angawootni kunneen dhimma siyaasa biyyattii keessa kallachumaan kan seenanidha jechuun yaadoleen ka’aa jiran sirrii akka hintaane dubbatanii, dhimma biyyattii keessatti raawwatamaa jiraniif guddifachaa hinbarbaadnuu jedhaniiru.
Akka ibsa Obbo Mallasitti, dhimmi daawwannaa biyyoota sadeenii haala tokkoon kan ilaalamu osoo hintaane, qofa qofaatti kan ibsamuu danda’uudha. Hariiroon Itoophiyaan Imireetota Arabaa Walta’anii waliin qabdu seenaa yeroo dheeraa kan qabudha jedhanii, biyyootni lameen gama hawaasummaafi dinagdeetiin waliin hojjechaa turaniiru; ammas caalaatti waliin hojjechuuf fedhii guddaa qabu. Kunimmoo ciminaan kan itti fufuudha.
Daawwannaa Ministira Haajaa Alaa Ruusiyaa ilaalchisees Obbo Mallas yaada kan kennan yoo ta’u, karoorri kun durumaan kan qabame ta’uusaa himaniiru. Hariiroon biyyoota lameeniis waggoota 120 kan lakkoofsise waan ta’eef, keessumaa dhimmoota hawaasummaafi dinagdeerratti kallattii waliin hojjetanirratti kan marii’atamuudha jedhaniiru.
Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Reeksi Telersanis gara Itoophiyaa dhufuunsaanii dhimma keessoo biyyattiirratti kan xiyyeeffatu osoo hintaane walitti dhufeenyi Itoophiyaafi Ameerikaa daran murteessaa waan ta’eefidha jechuun dubbataniiru. Kunis, Itoophiyaan nagaafi tasgabbii biyyoota gaanfa Afrikaa eegsisuuf ergama Mootummoota Walta’anii fudhachuun adda durummaan kan waamamtu waan taateef, caalaatti biyyoota Lixaaf kan barbaachistu ta’uushee eeraniiru. Reeki Telersanis hariiroo duraanii caalaatti cimsuuf gara Finfinnee dhufan malee mootummaan ce’umsaa akka hundaa’uuf dhiibbaa kan taasisan miti jedhanii, yoo yaadames fudhatama akka hinqabne tuqaniiru.
Torban kana/This_Week 10576
Torban darbe/This_Month 96933
Guyyaa mara/All_Days 1435356